News - အဆိုးဆုံးဆောင်းရာသီကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအထည် ၅ ခု
တီရှပ် (Anti-static fiber)
ဘောင်းဘီ (Anti-static အမျှင်ဖြင့်)
ဂျာကင်အင်္ကျီ (Anti-static အမျှင်ဖြင့်)
ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ (Anti-static အမျှင်ဖြင့်)
ချည်ထည်အ ၀ တ်အထည် (Anti-static fiber)
ရေစိုခံဂျာကင်အင်္ကျီ (Anti-static fiber နှင့်အတူ)
ဝါဂွမ်းအင်္ကျီ (Anti-static အမျှင်ဖြင့်)
Safety Vest (Anti-static အမျှင်ဖြင့်)
Overall (Anti-static အမျှင်ဖြင့်)
နို ၀ င်ဘာလတုန်းကခင်ဗျားအကြိုက်ဆုံးစကတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးချည်မျှင်အင်္ကျီလိုဝတ်စုံတစ်ထည်နဲ့လုပ်တယ်။ သို့သော်ရက်အနည်းငယ်ကြာသော်သင်၏အပြင်ဘက်သို့ထွက်လိုက်သည်နှင့်ဒုတိယအနေဖြင့်သင်၏ခါး၌ပုန်းနေလိမ့်မည်။ သတင်းဆိုး - မင်းမှာ static ရှိတယ်။ မည်သည့်မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုကိုမဆိုရှောင်ရှားရန်အဆိုးရွားဆုံးသောပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဖြစ်သောအထည်ငါးခုနှင့်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောအလောင်းအစားများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
၁ ။ သင်က၎င်း၏ဆံပင်မွေးမြူရေးလှောင်ပြောင်သရော်မှုများကိုကောင်းစွာသိ၏။ သို့သော်သင်၏အဖိုးတန်ကေဘယ်ကြိုးသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှဖြစ်ရန်လိုသနည်း။ သိပ္ပံသင်ခန်းစာ - သဘာဝတိရိစ္ဆာန်အမျှင်များသည်ဝတ္ထုများအတွင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်အစိုဓာတ်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးအီလက်ထရွန်များ (ဥပမာ - ငြိမ်) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၂ ။ သိုးမွှေးကဲ့သို့တူညီသောအကြောင်းပြချက် - သားမွေးသည်ဖုံးကွယ်ထားဆဲဖြစ်သည့်အတွက်ပိုဆိုးနိုင်သည်။
3. ပိုး။ အားလပ်ရက်များပတ်လည်တွင်စလစ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်သူမည်သူမဆိုရရှိနိုင်သည်။
4. Polyester ။ နိုင်လွန်တင်းတိမ်များကဲ့သို့ဒြပ်အထည်များသည်အစိုဓာတ်ကင်းစင်သည်။ (Woohoo!) သို့သော်ခြောက်သွေ့သောပတ် ၀ န်းကျင်သည်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာများလည်းဖြစ်တတ်သည်။ (Womp, womp ။ ) ကံမကောင်းတာက faux သားမွေးကစင်မြင့်ငါးကွင်းပါ။
5. Rayon ။ Semi-synthetic ကောဘယ်လိုလဲ။ သို့တိုင်ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေဖန်တီးပေးသည်။ (ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သစ်သားပျော့ဖတ်။ ) ဒါကြောင့်မမျှော်လင့်ဘဲနေရာများသို့လှည့်ထွက်သွားနိုင်သောသင်၏ပိုး - ပုံနှင့်ဆင်ထားတဲ့ဘလောက်စ်အားလုံးကိုသတိထားပါ။
၁။ ချည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့ဘဝ၏ထည်ကြားနေမြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တိုင်းသင်သည်အာမခံချက်မရှိသောဇုန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ဂျင်နင်၊ chinos၊ tees, button-down, cardigans နှင့် field jackets များကိုရောက်ရှိနိုင်သည်။
2. သားရေ။ tanning လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်နေရာတွင်သင်၏ moto ဂျာကင်အင်္ကျီသည်၎င်း၏စီးဆင်းမှုကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကမင်းရဲ့ puffy ကုတ်အင်္ကျီကိုရိုက်နှက်နေတယ်။
အခြားသူများအပေါ်မည်သည့်ပိတ်ထည်ကိုမဆိုကျော်ဖြတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့မပြောပါ။ ('ဘယ်အချိန်မှာသိုးမွှေးကိုတောင်ဝတ်မလဲ။ ' ဒီ static anti-static ကုထုံးကိုသုံးရန်ဖော်ရွေတဲ့သတိပေးချက် - အထည်ပျော့ပြောင်းဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ခြောက်သွေ့တဲ့စာရွက်နဲ့ပွတ်ပေးပါ။ hairspray နှင့်အတူ spritz (သို့မဟုတ်ရေ); သတ္တုကြိုးနှင့်အတူကျော်ပြေး; သို့မဟုတ်လုံခြုံရေး pin ကိုအပေါ်ကလစ်။
HEBEI FCE အထူးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ CO ။ , LTD,